Inguqulo 0.9.2 – 4 kweminyaka futhi singazi aphambane
March 11, 2013 by okunikezwayo 3 Amazwana
Thina sakhula 4 (empeleni 5) Tulips yokugubha usuku lwethu
Yebo, ingaphezu kweminyaka emine kusukela kokukhululwa kwale nguqulo yokuqala ye Transposh for wordpress. Futhi impela, sesihambe ibanga elide impela.
Transposh usetshenziswa izinkulungwane sites lonke web, futhi esinabo abasebenzisi eziningi happy (and a few less happy ones 🙂 ).
Le nguqulo, 0.9.2, akuyona ngempela ukuthi yini silindele ukuba kube manje, emva kweminyaka emine thina kwakuyobonisa kulindeleke ukuthi umuntu version (mhlawumbe ezimbili) bayobe ezikhishwe kakade. Kodwa ngokusobala, kuphila ingabe kuyaqabukela siqhubeka ngendlela uhlela yona.
Isihloko salesi zikhala empeleni libhekisela ekuziphatheni entsha ye parser yethu, lapho sasivame sihlangabezana &nbsp; (okufanele isikhala non-ukuphulwa) thina ngempela waphula ibinzana ezimbili, okuyinto kunalokho okuphambene ngqo walokho izinto kwakufanele. Ngakho ngethemba lokhu manje fixed, futhi thina angeke usaba aphambane!
Nezinye izinguquko zihlanganisa:
Ukwesekwa eziyisisekelo Woocommerce ukuhlanganiswa
Ukubhala ngaphezulu icala lapho nezinye plugin noma themes abangela le process_page ukubizwa ngaphambi kwesikhathi
Fix a bug ezimbi lapho inguqulo efanayo uvele isigaba ezingaphezu kwesisodwa
Bing ziye wanezela izilimi ezimbili
Fix the bug owabikwa dserber disallowing yokukhetha kolimi on ngeposi zivimbelwe kuphi translate_on_publish kwase
Vuselela for. Po amafayela, Ukuhumusha Turkish by Omer Faruk Khan
Kuzoba mnandi lokhu version! Lona umyalo! 🙂
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele, Izimemezelo ukukhululwa, Izibuyekezo Software Umake With: bing (MSN) umhumushi, usuku lokuzalwa, minor, Parser, ukukhululwa
Ephreli 26, 2013 at 2:26 pm
Ngakho yile &nbsp; okufanele ukuba kuthathwe? Kusukela ngcono yakamuva, Ngibona it njengengxenye ongakhetha Translation on the front ekupheleni, kungani?
Ephreli 27, 2013 at 12:13 at the
Akufanele usibone in ohlangothini phambi site, uma ubona lokhu sicela uxhumane nathi ngqo, futhi Sizobona ukuthi ebangela lokhu.
Kwangathi 31, 2013 at 9:20 at the
Kimina, le nguqulo kuba khona kanye umsebenzisi-friendly, Bengingeke ashintshe kunoma yimuphi.